Onyankopɔn Ani Wɔ Wo So (Hiob 34:​21)
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ASƐM A ƐDA SO | ENTI WO HO HIA ONYANKOPƆN?
Onyankopɔn Ani Wɔ Wo So
“[Onyankopɔn ani] tua onipa akwan, na n’anammɔn nyinaa ohu.”—HIOB 34:21.
Ɔbaatan pa biara ani ku ne mma nketewa ho, titiriw bere a wosusua paa no
NEA ENTI A EBINOM NNYE NNI: Nhwehwɛmu bi a wɔyɛɛ no nnansa yi ara kyerɛ sɛ, asase a yɛte so yi, nsoromma akuwakuw a atwa ho ahyia bɛboro ɔpepepem 100. Sɛnea ɔsoro sõ bae trɛw nti, ɛma nnipa pii bisa sɛ, ‘Nnipa a yɛnsɛ hwee a yɛte asase ketekete so de, Onyankopɔn de yɛn reyɛ dɛn?’
NEA ONYANKOPƆN ASƐM KA: Onyankopɔn amfa Bible no amma yɛn kɛkɛ ankɔpɛ baabi antena. Mmom, wama yɛn awerɛhyem sɛ: “M’ani bɛba wo so, na matu wo fo.”—Dwom 32:8.
Susuw Hagar ho hwɛ. Ɔyɛ Egyptni bea a ɔtenaa ase bɛyɛ mfe 1,900 ansa na Yesu reba. Ná ɔte Sarai nkyɛn. Bere bi, Hagar yɛɛ aniammɔho. Enti Sarai teetee no, na oguan kɔɔ sare so. Mfomso a Hagar dii nti, na ne ho nhia Onyankopɔn bio anaa? Bible ka sɛ: “Yehowa bɔfo huu no.” Ɔbɔfo no kaa Hagar koma too ne yam, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yehowa ate w’amanehunu.” Ɛno maa Hagar ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Woyɛ Onyankopɔn a wuhu ade.”—Genesis 16:4-13.
‘Onyankopɔn a ohu ade no,’ wo nso, n’ani wɔ wo so. Ɛho mfatoho bi ni: Ɔbaatan pa biara ani ku ne mma nketewa ho, titiriw bere a wosusua paa no. Onyankopɔn nso, wɔn a wɔn asɛm yɛ mmɔbɔ paa no, wɔn koraa na n’ani ku wɔn ho kɛse. Yehowa ka sɛ: “Mete baabi a ɛkorɔn na ɛyɛ kronkron; me ne nea wabubu na ne honhom abrɛ ase na ɛte, sɛ mɛma abrɛfo honhom ne wɔn a wɔabubu wɔn no koma anya ahoɔden.”—Yesaia 57:15.
Nanso, ebia wubebisa sɛ: ‘Onyankopɔn ani wɔ me so a, dɛn pɔtee na ɔhwɛ wɔ me ho? Ɔhwɛ me tenten anaa me kɛse? Anaasɛ ɔhwehwɛ me komam hu sɛnea mete ankasa?’